Barcelona Oo Xili Ciyaareedkii Labaad Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaystay La Ligaha
shiiqa May 14, 2016 No Comments
Kooxda Barca ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xiriir ah ku guuleysatay koobka horyaalka Spain ee La ligaha Iyadoo marti u aheyd kooxda Granada.
Kooxda Barcelona guusha ay gaartay waxey uga mahadcelineysaa laacibkooda reer Uruguay ee Suares isaga oo kulankaan dhaliyay sedexley.
Kooxda Barcelona ayaa markii 24aad jeebka ku ridatay koobka horyaalka La ligaha iyadoo aheyd kooxda difaacaneysay horyaalka.
Sidoo kale Barca ayey u aheyd iyadoo markii 10aad koobka La Ligaha ku guuleysatay maalinkii xili xiyaareedka ugu danbeysa kooxda Barcelona ayaa garoonka kusoo gashay dar dar aad u xoogan, iayagoo maanka ku hayay in aysan dib usoo laaban,
qaladaadkii ay hore u galeen oo ay dhibco badan kusoo lumiyeen iyo sidoo kale waliba ay maanta aheyd maalinta u danbeysa xili ciyaareddkan, oo waliba rajada Barcelona ee koobka ay ku xirneyd in ay Granada ka badiyaan.
Durbadiiba waxey sameeyeen weraro aan kala joogsi laheyn, iyo fursado abuuris iyaga oo jahwareer ku riday kooxda kasoo horjeeday ee Granada.
Daqiiqadii 22aad Suarez ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Barcelona, isla daqiiqadii 38aad ee qeybta hore ee cayaarta ayuu mar kale Suarez shabaqa soo taabtay, iyada oo lagu kala nstay 2 iyo waxba.
Markii leysu soo laabtay ayey kooxda Barcelona halkeedii kasii waday,weerarka iyadoo abuurtay fursado badan oo gool loo fishay, laakiin daqiiqadii 86aad ayuu mar kale shabaqa soo taabtay Luis Suarez. Isaga oo waliba kulankaan dhaliyay sedexleey.
Waxaa Barcelona ka dh<awacmay Javier Mascherano iyada oo garoonka laga saaray waxeyna u muuqatay bilowgii cayartaba in uu qabay dhaawac muruqa ah, laakiin Mascherano ayaa ciyarta sii watay ilaa waqtigii laga saarayay garoonka.
Ugu danbeyntii kooxda Barcelona ayaa dhinac isaga dhigtay kooxda kasoo horjeeday, ee Granada iyada oo Barca markii labaad oo xiriir ah ku guuleysatay koobka La Ligaha. Halka Luis Suarez uu xili ciyaareedkaan dhaliyay 40 gool.